Alaa Abd El Fattah , Ejiptiana Mpikatroka Mafàna Fo Nosamborina — Indray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2013 7:18 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Swahili, Español, Français, Nederlands, македонски, عربي, 繁體中文, 简体中文, English
Ny Alakamisy 28 Novambra, tokony ho tamin'ny 10 ora alina teo ho eo, tao an-tranony, nosamborina i Alaa Abd El Fattah ilay Ejiptiana mpikatroka mafàna fo sady bilaogera manana ny toerany. Nisy didy fampisamborana navoaka ho an'i Abd El Fattah tamin'ny Talata lasa teo, taorian'ny fanaparitahana mahery setra natao an'ireo mpanao hetsi-panoherana tao Kairo. Nilaza tamin'ireo media ao an-toerana ny rain'ilay bilaogera fa natao nifanaraka tamin'ilay lalàna vaovao mandràra ny fanaovana fihetsiketsehana eny an'arabe ao Ejipta ny fisamborana azy. Olona 51 raha kely indrindra no nosamborina tamin'izay andro izay, isan'ireny ireo marobe mpikatroka mafàna fo malaza. Maro no voadaroka sy nanaovana filàm-baniny tamin'ny resaka ara-nofo.
Nalain'ny polisy ihany i Alaa na dia nilaza aza fa efa nihevitra ny hanatona ny polisy izy ny Sabotsy, araka ny fanambaràna iray nataony ary nalefan'ny nenitoany, Ahdaf Soueif, Ejiptiana mpanoratra manana ny lazany, ho ao amin'ny Facebook.
Ny talen'ny Human Watch ao Ejipta, Heba Morayef, dia nampifandrohy ny fisamborana azy amin'ilay lalàna mandràra ny hetsi-panoherana, novolavolaina tany ampiandohan'ity herinandro ity :
Nogadraina i Alaa Abd El Fattah fony fitondràn'i Hosni Mubarak, nandritra ny 45 andro ary toy izay indray tamin'ny 2011 fony fitondràn'ny Filankevitra Ambonin'ny Tafika Mitam-piadiana, nijanonany am-ponja nandritra ny efa ho roa volana. Miatrika vesatra ihany koa izy ny 2013, eo ambany fitondran'ny governemantan'i Mohamed Morsi, niaraka amin'ilay Bassem Youssef, mpanao hatsikana malaza, izay hitan'ny maro ho fiampangàna noho ny antony ara-politika nampiasaina ho fandemena. Isak'ireny fotoana ireny, nipongatra hatrany ny tenifototra #FreeAlaa mba hanehoana firaisankina aminy. Tahàka ny efa miverina mandeha indray izy io izao.